Arsenal Oo Xiriir Cusub La Samaysay Xiddiga Manchester City Ee Gabriel Jesus.
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo Xiriir cusub la samaysay xiddiga Manchester City ee Gabriel Jesus.
May 11, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay xiriir toos ah la samaysay Gabriel Jesus si ay ugala hadasho u dhaqaaqista weeraryahanka Manchester City inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
25-sano jirkaan ayaa mar kale si joogta ah ugu ciyaarayay Citizens xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo saftay 39 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay 13 gool iyo 12 caawin.
Qaab ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Jesus ee horyaalka Premier League ayaa ahaa mid cajiib ah isaga oo dhaliyay 6 gool waxana uu diiwaan gashaday hal caawin 5-tii kulan ee ugu dambeeyay halka uu gool ka dhaliyay kooxda Real Madrid kulan ka tirsanaa Semi-finalka champions League.
Laacibka heerka caalami ee dalka Brazil ayaa wax ka yar 12 bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa Etihad Stadium, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray hadal heyn badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa usbuucyadii la soo dhaafay.
Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay go’aansatay inay la soo wareegto weeraryahanka, maadaama ay suurtogal tahay inay waayaan labada Eddie Nketiah iyo Alexandre Lacazette beeca xorta ah dhammaadka June.
Sida laga soo xigtay saxafiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano , Gunners ayaa xiddiga reer South America dhigtay meesha ugu sareysa ‘liiskooda’ ka dib markii ay xiriir toos ah la sameeyeen weeraryahanka.
Si kastaba ha ahaatee, Romano ayaa beeniyay inuu jiro xiriir toos ah oo dhexmaray labada kooxood iyadoo la soo jeediyay in lacagta lagu kala iibsanayo, oo la rumeysan yahay inay ku kacayso 42 milyan ginni, horay loogu heshiiyay.
Weriyaha ayaa sheegay in imaatinka Erling Braut Haaland ee Manchester ay u badan tahay inuu arki doono Ciise inuu u dhaqaaqo raadinta waxqabadyo joogto ah, maadaama uu hoos u dhigi doono dalabka xiddiga reer Norway ee ka soo wareegay Borussia Dortmund oo ay haatan kooxdu xaqiijisay .
Man City ayaa iska joojisay tartankii ay kula jirtay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid si ay heshiis ugu helaan Haaland, kaasoo qandaraaskiisa Jarmalka lagu burburin karo 51.2 milyan ginni.
Jesus ayaa dhaliyay 95 gool waxana loo diwangeliyay 46 caawin 234 kulan oo uu u saftay Man City tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee Palmeiras bishii January 2017